Indlu yekoloniyali kwidolophu yaseCarolina - I-Airbnb
Indlu yekoloniyali kwidolophu yaseCarolina
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuna
Indawo entle kakhulu entliziyweni yesixeko. Ulwazi oluchanekileyo malunga kukhenketho eziphilayo kwi Chapadas das kummandla Mesas National Park, kunye nokufikelela lula kwiinkonzo ezinikezelwa ziibhanki, kwiikhemesti, izibhedlele, iivenkile, iindawo zokutyela, nemivalo, zokutyela, ndawo zokwenza umthambo, izitishi igesi, zokuzilungisa kunye neminye imisebenzi. Indlu yobukoloniyali kumbindi weCarolina inendawo ebalaseleyo, ilungele ukuzonwabisa, imidlalo kunye nokuba nesnack enikezelwa kwizikwere ezikufutshane.
Indlu endala yokwakha egcina iimpawu zokuqala ze-200 iminyaka. Ukwakhiwa kweendonga eziphakamileyo, kunye neenkcukacha ekukhululekeni okuphezulu kwi-portal yangaphakathi kunye ne-facade ekhumbula izindlu zobukhosi. Ngophahla lwekholoniyali, kunye nokungena komoya okwaneleyo, indlu inamagumbi ayi-7 anefenitshala yomthi: 1- Iholo yokungena evuliweyo, enebhedi yesofa yesibini kunye nezitulo ezine zemacaroni. Kwiindonga, umboniso wemisebenzi yezandla yemveli evela kubantu baseTimbira basezantsi kweMaranhão nakumantla eTocantins. 2- Igumbi lokuhlala elibanzi elidityaniswe negumbi lokutyela. Ifakwe iseti yesofa, isitulo sobuvila, i-hammock ephindwe kabini eyandisiweyo phambi kwefeni enkulu (udonga) eququzelela isimo sakho sokuphumla okufutshane okanye okude. Ikhabhathi yeencwadi enomabonakude we-21' turbo, itafile yekofu, kunye netafile yabantu abathandathu. Kwiindonga unokuyithanda imizobo eyenziwe ngezandla ezenziwe ngookhokho bentsapho, kwaye kukho ukuhanjiswa okunengqiqo kwamanqaku ombane; 3- Igumbi lokuhlambela eline-hydraulic kunye nokufakelwa kombane. 4 Le lokulala yokuqala iqulethe: ibhedi kabini, ibhedi enye, a fan enkulu (emile) kunye remote control, itafile kwebhedi, ibhokisi bagi, a ngubo elincinane, kukho esifubeni iimpahla (bed nakwibhafu), i kwisitulo , i-hanger yedyasi, kwaye kwakhona, ezinye iindawo zombane kunye nokuphunyuka kwenethiwekhi ezisasazwa kumacala ahlukeneyo endongeni. 5- Igumbi lokulala lesibini lihonjiswe ngebhedi ephindwe kabini, ibhedi enye kunye (iidrowa; ikhabhathi eyakhelweyo ngaphakathi eneentente ezimbini zokumisa iintente, inethi enkulu yeengcongconi kunye noomatrasi abavuzayo); a isiqu undlala nanceba, uhlobo bobukoloniyali ukunxiba theyibhile isipili (a nokunqaba wokwenene), i nightstand, enkulu (imi) fan kunye remote control, ngumbophi kunye bagi, kwakunye nezinye iindawo umbane kunye nothungelwano esindileyo zisasazwe kumacala ahlukeneyo yeendonga. I-6- Ikhitshi esisiseko kunye nefriji, isitofu (izitshisi ezi-4), ishelufu, kunye ne-pantry enomnyango apho izixhobo zihlelwe khona: iipani, iimbiza kunye needrowa ezineemveliso ezahlukeneyo. 7- Ngasemva kwendlu, indawo yesamente, yindawo enempahla egqunyiweyo, enetanki kunye nomatshini wokuhlamba. Inetanki yamanzi eyakhiwe kwisiseko seentsika ezinde, inika ishawari emangalisayo. Ngaphantsi komhlaba, le ndlu isaqinisekisa imfuno yamanzi ngokusebenzisa i-25,000 yelitha yequla, kunye nempompo yombane. Kukho indawo encinci yomhlaba, le yeyabahlobo abanemilenze emine (ingcebiso). Ukukhetha ukubandakanya ekhaya, sinika i-charcoal grill, kunye ne-skewers kunye ne-grill. Kwaye xa ukhenketha esixekweni, iibhayisekile ezimbini ezindala zisebenza kakuhle.
Wenze ukhetho olukhulu lokuba seCarolina kwaye wonwabele ubutyebi bentlalo-ntle obunikezelwa ngummandla, ngokuthuthuzela kunye nomgangatho wobomi! IsiXeko sithathelwe ingqalelo "njengenkosazana encinci yaseMaranhão", uCarolina unobubele kwaye ukummandla owamkelekileyo, apho unokujonga umhlaba omangalisayo, ukonwabele iingxangxasi ezichumileyo nezingaqhelekanga, kwaye ube nemilambo entle enamanzi acwengileyo, imiwonyo entle, iihorizons eziluhlaza. Uhlala ngoxolo nangokuzola! Konke oku ngendlela efikelelekayo, emangalisayo kwiindlela ezigangathiweyo, ziphawulwe kakuhle, zibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo kunye namandla alungileyo. Nangona iyindlela exakeke kakhulu, ukhuseleko lubonelelwa sisikhululo samapolisa se-PM esikufuphi, kwaye sihlanganiswe ngokupheleleyo kubomi bemihla ngemihla basekhaya. Yindawo edibanisa zonke izibonelelo zabakhenkethi abathanda ukonwabela ngaphandle kokonwaba.
Isixeko saseCarolina sizolile kwaye sikhuselekile. Abamelwane banobuhlobo, banomoya wokubuk’ iindwendwe kwaye banobuhlobo. Sikwindawo enelungelo lokufikelela kwiindawo zokutyela, ii-snack bar, iikhemesti kunye norhwebo olwahlukeneyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Luna
Iindwendwe kunye nabo baza kuba ngabamkeli-ndwendwe banokuqhagamshelana ngencoko ka-Airbnb, ngo-whatsapp, nge-imeyile baze bafowune nanini na befuna. Ndifumaneka ukuba ndibaphendule ngokukhawuleza.